महामारीका बेला पत्रकारसँग अश्लील शब्द बोल्दै मेयर द्वारिकालाल चौधरीले थर्काए (भिडियोसहित)
काठमाडौं । विश्वभर कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीको रुप लिएको छ । नेपालमा पनि संक्रमण देखापरेको छ । संघीय सरकारले संक्रमण फैलिन नदिएन प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई सावधानी अपनाउँदै र सचेत गराउन निर्देशन दिएको छ ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण हुन नदिन स्थानीय सरकार सक्रिय रुपमा लाग्नु पर्ने हुन्छ । यही बुझ्ने क्रममा पत्रकारलाई सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले अश्लील शब्द बोलेको भनिएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ ।
एरिना टेलिभिजनको ‘कोरोनाभाइरस अपडेट’ लाइभ कार्यक्रममा पत्रकारले कुरा गर्न फोन सम्पर्क गर्दा टेलिभिजनका प्राविधिकलाई अपशब्द र अश्लील बोलेको सार्वजनिक भिडियो सुनिन्छ । सो भिडियोमा सुनाइएको अडियोमा मेयर चौधरीले दिएको जवाफ रहेको सो टेलिभिजनकी प्रस्तोताले बताएकी छन् ।
फोन राख्न भन्दै मेयर चौधरीले अश्लील शब्द बोलेको सो भिडियोमा सुनिन्छ । फोन गर्नेलाई मेयर चौधरीले थर्काएका छन् । तर, यसबारे मेयर चौधरीले हालसम्म केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । मेयर चौधरीले नै जवाफ दिएका हुन् वा होइनन् यसबारे पनि उनले केही बोलेका छैनन् । के कारण उनी रिसाएका हुन् भिडियाेमा केही खुलाइएकाे देखिँदैन ।
इटहरी उप महानगरपालिका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरी थारु त थारु सारै गाणु थारु रहेछ |
Posted by Sailesh Sanba Limbu on Thursday, March 26, 2020
अत्यधिक रक्तश्राव हुँदा गर्भवतीको अकालमा मृत्यु, तीन छोरीको विचल्ली
युएईमा थप ३ जना नेपालीमा देखियो कोरोना
मान्छे घरबाट ननिस्केपछि सहरको सडकमै रमाउँदै घुम्न थाल्यो मयुर
कोरोनाको महामारीमा प्रचण्डको मौनता केका लागि ?
कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ६९ हजार पुग्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति ? (तालिकासहित)